IMicrosoft ijika iigiya zemfazwe kunye neLectrosonics | Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » iindaba » IMicrosoft ijika iigiya zemfazwe kunye neLectrosonics
IMicrosoft ijika iigiya zemfazwe kunye neLectrosonics
Vancouver, BC (NgoSeptemba 23, 2019) -I-Coalition, iqela eliphumeleleyo lokufumana amabhaso anoxanduva lokulawula i-Gear War of War Franchise ye-X-dollar kwi-Xbox Game Studios, isebenzisa izixhobo ezikwinqanaba eliphezulu ekuyileni imidlalo ye-blockbuster. Kwizixhobo zeGars 5 ezigxekwa kakhulu, uMlawuli we-Coalition Audio uJohn Morgan kunye neqela lakhe bebexakekile berekhoda iiseshini zokuthathwa kwabadlali bembethe izinto ezambethe imizwa. Icandelo lomsindo kufuneka lisondele, licoceke, kwaye lilandele abadlali ngokwenza ii-avokhado ezininzi. Kule nto, uMorgan unyanzelisa Lectrosonics ngaphandle kwamacingo, ngakumbi iirisithi ezininzi zeR400a zifunyenwe ziiSMV kunye nee-LMb transmitters.
"Ukubanjwa kweentshukumo, okanye ukubamba ukusebenza, yinkqubo yokurekhoda isandi kunye nokuhamba kwilizwe elibonakalayo. Siyisebenzisa ikakhulu kwimiboniso bhanyabhanya, ”utshilo uMorgan, ebhekisa kwizigcawu eziqhubela ibali phambili phakathi kwamaxesha emidlalo. "I-Boom kunye negumbi mics lenzelwe ukuba likunike umbono wekhamera, ofanelekileyo kwimeko yemiboniso bhanyabhanya yendabuko. Kwindlela yokubamba eshukumayo, 'iikhamera' zinokuba naphina, kwaye inqaku lipheleleyo kukuba kufuneka ubambe umfanekiso we-3-D, 360-degree ejikeleze abalingisi ukulungiselela naluphi na ulwalathiso lomdlalo onokuya kuwo. Yiyo loo nto kubalulekile ukuba bonke abadlali benze iilevali kunye neepakethe zomzimba. ”
Into yokuqala malunga ne-SMV kunye ne-LMB transmitters ezinceda le nkqubo zilula: Zicwecwe kakhulu kwaye zilula. “Abadlali kufuneka babe nenkululeko epheleleyo yokuhamba,” ucacisa umntu osebenza naye uMorgan, uMyili weNgqondo yoMdibaniso uEdward Bauman. "Izixhobo zomzimba ziqinile kuba sifuna uthungelwano oluchanekileyo olwenziwe lomzimba ukuze iselfowuni ifumane. I-Lectrosonics ipakisha i-Velcro ngaphakathi ngaphandle kokuphazamisa abalingisi, kubalulekile xa umntu esenza umsebenzi ocingo kunye nokuxhoma i-20 iinyawo emhlabeni.
"Sikwanabalingisi abasibhozo ababedlala ngexesha elinye, nto leyo eyenza ukuba ilingane neLectrosonics gear ngokukhawuleza xa kusenziwa kujongisiso lwamaxesha," utshilo uMorgan. "Ekuqaleni kwempu, sinokuskena kube kanye - sisebenzisa iibhloko ezimbini ezahlukeneyo-kwaye singaze sibe nangxaki yokuphazamiseka. Ungazixuba zonke iziteshi kwaye uyavakala ngokungxama kuba uva konke ukuphefumla, yonke imigcobo, bonke abadlali beengxolo bayazenza ngenxa yeenzame zabo zomzimba. Kwilizwe lomdlalo wevidiyo, ezo zinto ziyigolide. Inokubonakalisa ukuba inokwenzeka naphi na kwi-cinematics okanye umdlalo weqonga, ke ufuna ukuyigcina yonke. Ke ngoko, sidinga owona mgangatho uphezulu wentetho yezinto ezingelamazwi kunye nengxoxo. ”
UMorgan uthi loo nto yomgangatho wezinto ezimbini: “Ndicinga ukuba izinto zethu esizithandayo ngeLectro kukugcina indawo ekuhanjiswa ngayo nakwindawo yengxolo esezantsi kwindawo ebekiweyo yokufaka. Kubonakala ngathi banoluhlu olubanzi lokufumana kunezo ezinye iimveliso zabenzi. Kwenza kube lula ukucofa izinto. Emva koko, ukuba abahleli boluvo kufuneka bangenise nantoni na kumxube xa besebenza kumdlalo, abanyuseli ndawo yengxolo kunye nayo. "
"Kuhle kakhulu ukuba ungabona inzuzo eyiyo yomdlulisi kwisiboniso somamkeli," wongeza uBauman. "Ukuba kwenzeka nangaliphi na ithuba ukuba shushu kakhulu okanye sibande kakhulu kwi-actor ethile, kuyakhawuleza ukulungisa. Siyazi ukuba ingxaki sisiphumo sokufaka somdlulisi okanye imveliso ayamkelayo. Ezo zinto zimbini xa zidibeneyo zide zisivumele ukuba siqiniseke ukuba yingxaki le uqobo. ”
Iqela likwanokubona ubomi beebhetri ezihambisa kwiR400a abafikayo, ebonakalise ukuba lubalulekile. "Ngokukodwa xa sisebenzisa i-SMV, ethatha ibhetri enye kuphela njengokurhweba ngenxa yokuba incinci kangakanani, oku kusinika ixesha naluphi na utshintsho lwebhetri olunekhefu kwimveliso," Iinkcukacha zikaMorgan. Ke ngoko, ukuba sinokuthi, masithi, ezinye iindawo ezimbini ezizayo kwaye sikwisiqingatha setyala macala onke, singabaleka bonke abanye kwangoku size senze utshintsho xa abadlali bethatha ikhefu. Ngezinye iinkqubo ezininzi, unokurekhoda de igqithise iwele, emva koko kufuneka uphazamise imveliso. Eli lixesha, elibiza imali, kwaye akukho mntu uyithandayo loo nto! "UBauman ungene ngaphakathi," ndingatsho ukuba akukaze kube kudala sabanjwa singekho bomi malunga nebhetri. "
Ubungqingqwa kunye nokulula kokusebenzisa ujikeleze uthando loManyano lweLectrosonics. “Kumnandi kakhulu ukuba iimenyu kunye neendlela zokunxibelelana azinzima,” utshilo uBauman. Kwi-R400a, umzekelo, kukucofa nje ivili kunye neqhosha elingasemva. Kuyakhawuleza ukutshintsha into, ukuba sithe nayo ifuna ukuyenza. Inkqubo ekude yeLectroRM inceda kakhulu, nayo. Ngokusondela nje kwi-transmitter, unokuyilawula ngaphandle kokuyisusa kumdlali weqonga. ”
“Zininzi izinto ekubanjwayo kuzo, ngenxa yoko iipakethe zinokubetha,” wongeza uMorgan. “Asikaze sipakishwe ipasile ngenxa yoxinzelelo, kwaye sisebenzise ezinye izixhobo ezivela kwamanye amajoni- owaziwayo- ayengangqinelani kwaphela. Intambo ye-mic inokuphuma, i-inshurensi yebhetri ingawa ... engaze yenzeke ngeLectrosonics. I-rig yethu iyonwabisa ngokwenene ukuyisebenzisa kuba sisiseko nje se-bombproof. Siphumelele imbasa yabahleli beMoto yeModeli yoMsindo ngeMiboniso bhanyabhanya kwiGiya zemfazwe 4, kwaye sinethemba lokuba iLectro isincedile ukuyenza kwakhona! ”
Umdibaniso liqela elinetalente labadlali abanobuchule bokuyila, abanomdla wokuzonwabisa abavela kwihlabathi liphela abahlangeneyo kumnqweno wabo weGiya zemfazwe. Ifumaneka eVancouver, eCanada, le studio ephumelele amabhaso yazisa amafa e-Gears avunyiweyo kakhulu ngenkolelo yokuba ukuba ufuna ukuya kude, yiya kunye.
I-Xbox yintloko kaMicrosoft yeyona nto iphambili yokudlala kunye nohlobo lokuzonwabisa olwenziwe ngabadlali beGerman One nakwizixhobo zeWindows 10 I-Xbox ihambisa eyona midlalo yeyona nto ibalaseleyo kunye neyona ntlawulo yokudlala yoluntu kunye ne-Xbox Live. Olunye ulwazi malunga ne-Xbox luya kufumaneka kwi-Intanethi apha www.xbox.com.
IMicrosoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) yenza uguquko lwedijithali ixesha lelifu elinengqiqo kunye nomda okrelekrele. Umsebenzi wayo kukuxhobisa wonke umntu kunye nayo yonke imibutho esemhlabeni ukuze iphumelele ngakumbi.
Ihlonitshwe kakuhle ngaphakathi kwefilim, usasazo, kunye noluntu lwezobugcisa ukusukela ngo-1971, iinkqubo ze-Microphone zetayile ye-Lectrosonics kunye neemveliso zokwenza umculo ziyasetyenziswa mihla le kwizicelo ezinobuchule ziinjineli zomsindo ezinolwazi ngokuzinikela kwenkampani kumgangatho, inkonzo yabathengi, kunye nolutsha. I-Lectrosonics ifumene i-Akhawuntari yezeNzululwazi kunye neThekhinoloji ngetekhnoloji yayo yedijithali yeHybrid Wireless® kwaye ngumenzi waseMelika osekwe eRio Rancho, eMexico. Ndwendwela inkampani kwi-Intanethi apha www.lectrosonics.com.
Izithuba zakutshanje nge-msmediainc (ndinibone nonke)
KwiNew Zealand Game Show Brain Busters, iiLectrosonics zime kwiZenzo eziNcedisiweyo zaBantwana - Oktobha 20, 2020
I-Lectrosonics yazisa i-DCR 822 yeDijithali yeDiskhi eDibanisa iDijithali - Oktobha 6, 2020
I-Lectrosonics yazisa nge-DCHR Miniature Stereo Digital Receiver - Septemba 24, 2020
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli igiya Zempi UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli Lectrosonics i-lectrosonics ye-digital hybrid technology Microsoft Imikhonto kunye neentolo Injini yeVidiyo I-XBox 2019-09-24
Previous: URob Legato Usebenzisa uyilo lweBlackmagic ukudala imveliso eyiVenkile ye "The Lion King"
next: Isinxibelelanisi / uMlawuli woFoto